Apple inomira kusaina ese mavhezheni pamberi peIOS 11.2.5 | IPhone nhau
Mukombe weCupertino Shanduro dzese mushure meIOS 11.2.5 dzakamira kusaina, vhiki mushure mekuburitsa iyo yekupedzisira vhezheni. Zvikurukuru, Apple yakamira kusaina iOS 11.2, iOS 11.2.1 uye iOS 11.2.2 yezvinhu zvese izvo nhasi zvaienderana neshanduro idzi dzeIOS.
Apple inowanzo mira kusaina shanduro dzekare, pese paunoburitsa vhezheni itsva ye mobile operating system, mukuyedza kuitira kuti vashandisi vese vagone kunakidzwa nezvose zvakagadziridzwa zvakaunzwa, kwete chete kugadzirisa kugadzikana kwesystem, asi zvakare kudzivirira kubva kumatyisidziro anoramba achisvika paInternet.
Nekumira kusaina shanduro dzapfuura, Apple inoona kuti vashandisi havagone kudzokera kumashure vachizviisa panjodzi nematambudziko ekuchengetedza. Kusvika zuro, zvaikwanisika kuisa zvese iOS 11.2 uye iOS 11.2.1 uye iOS 11.2.2, sezvo maseva eCupertino akaramba achisaina, asi kwemaawa mashoma, hazvichakwanisika uye kana iwe ukaedza kudzikisira kune izvi shanduro kana zvisati zvaitika, chishandiso hachizombovandudzwa uye iwe unenge uchifunga nekusingaperi paunenge wakamirira kuti ugamuchire chisimbiso chisingazombosvika kubva kumaseva eApple.
Vashandisi veJailbreak, kana iyo inogona kuitika jailbreak iyo yanga ichitaurwa kwemavhiki mashoma eIOS 11.2.1 hongu vanozobatwa, kana kubva nanhasi vanga vasati vaita inodonhedza inoenderana vakamirira mukana wekumisikidza jailbreak, kana ikazosvika pamusika, nekuti parizvino hazvigoneke kuzviita mushure mekunge Apple yamira kusaina iyo vhezheni.
iOS 11.2.5 yakarova musika mune yayo yekupedzisira vhezheni svondo rapfuura ine akati wandei maficha akatenderedza Siri, achipa kutsigirwa zviri pamutemo kweiyo HomePod, Iyo nyowani Apple chishandiso iyo ichatanga kusvika kunevashandisi vekutanga kubva munaFebruary 9, pamusoro pekugadzirisa nekugadzirisa matambudziko akasiyana ekuita, chimwe chinhu chinowanikwa mune dzese shanduro dzeIOS inotangwa naApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inomira kusaina ese mavhezheni pamberi peIOS 11.2.5
Chinhu pamusoro pekugadzirisa kugadzirisa kugadzikana inhema huru. Nechekuvandudzwa kwega kwega sisitimu inowedzera kushanda kwayo. IOS 11 yakashandura yangu yekutanga gen iPad Mhepo, iyo yakashanda zvinoshamisa, isingachashandi. Iye zvino ndine Mhepo nyowani, ine IOS 1 uye ini handishinga kugadzirisa.
9x19 podcast: Apple inorova mabhureki ... zvakare